Sharing my Travel Notes for Bagan / ပုဂံသွားလည်မယ့်သူတွေအတွက် ချောရဲ့ ခရီးသွားမှတ်စုလေးကို Share ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ – The Voyager
* ရှေ့နှစ်က ပုဂံ သွားလည်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲရင်း ချော ကိုယ်တိုင် ချရေးထားတဲ့ မှတ်စု ဖြစ်တာမို့ ကြော်ငြာပေးခြင်း လုံးဝ (လုံးဝ)မဟုတ်ပါဘူးလို့ ကြိုပြောပါရစေရှင်။ တိုတိုရှင်းရှင်း လိုအပ်မယ့်အရာလေးတွေချရေးထားတာမို့ အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ❤️???️?
* Disclaimer: This is notasponsored or advertisement post. These are my personal notes that I had written down while planning for my trip to Bagan last year.
တည်းခိုစရာနေရာများ / Accommodations in Bagan ?️ ? ?
အခုနောက်ပိုင်း တည်းခိုစရာနေရာတွေက ပုဂံမြို့သစ်နဲ့ညောင်ဦးတစ်ဝိုက်မှာ ပိုများပါတယ်။ ပုဂံမြို့ဟောင်းမှာကတော့ ဇိမ်ခံဟိုတယ်တွေကပဲ ပိုများတာမို့ အဲဒီက ဟိုတယ်တွေကိုမဖော်ပြပေးတော့ဘူးနော်။ ဈေးနှုန်းတွေကတော့ အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာမို့ ဖုန်းဆက်ပြီးတော့သာ စုံစမ်းကြည့်ကြပါနော်။ ကိုယ်တွေလို Backpacker / budget traveler သမားတွေအတွက်၊ တစ်နေကုန် လျှောက်လည်ပြီး ညဘက်ခဏအနားယူဖို့ပဲ လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက် ဈေးသက်သာလေ ပိုအဆင်ပြေလေပဲလေ။
Most accommodations nowadays are found in New Bagan or Nyaung Oo. In old Bagan, only luxury hotels remain, and I have not listed luxury hotels here. Prices keep changing every day or every season so I will not mention it here. One can contact them and ask directly. For people like me, the backpackers or budget travelers, or for the people who like roaming around the whole day and just needaplace to take rest in the night, it’s better to get budget hotels with affordable price. Isn’t it?
ပုဂံမြို့သစ် / New Bagan
1) Nan Eain Thu +95 6165214 / 061-65118
2) Bagan Nova guest house +95 95018134
3) Bagan central hotel +95 9257136019
4) Yun Myo Thu Hotel +95 9784512021 / 061-65176
5) Ostello Bello Hostel +95 6165069
6) Hotel Yadnarbon Bagan +95 6165240
7) Crown Prince hotel +95 6165407
8) Arthawka hotel +95 9258726812 / 061-65321 / 061-65320 / 061-60310
9) Floral Breeze hotel +95 943176607 / 061-65309 / 061-65428
10) Kumudra hotel +95 6165402 / 061-65142
11) Kaday Aung hotel +95 6165070 / 061-65071
12) Thiri Marlar hotel +95 6165050 / 061-65229
13) NK Betelnut hotel +95 6165054
14) Mya Thida hotel +95 9450066777
15) Nothern Breeze guest house +95 6165472
ညောင်ဦး / Nyaung Oo
1) Inn Wa Motel +95 6160902
2) Eden Motel +95 6160815 / 061-60812 / 061-60639
3) Large Golden Pot hotel +95 9797749276 / 061-60074 / +95 92042028
4) May Kha Lar guest house +95 6160304 / 061-60304 / 061-60907
5) View Point Inn +95 6161070
6) Pyinsa Rupa Guest house +95 6160607
7) Thante hotel +95 6160315
8) Winner guest hose +95 9402501091 / 061-61069
9) Shwe Nadi Guest house +95 9402510136 / +95 9402510138 / 061-60409
10) Pann Cherry Guest house +95 6160075
11) New Life Guest house +95 9406661969 / 061-61035
12) Aung Mingalar hotel +95 6160847
13) Ever New Guest House +95 6161178
14) Golden Myanmar Guest House +95 6160901
15) Shwe Kaung Kin Motel +95 95006554
ပုဂံကို ဘယ်လိုသွားမလဲ / How to Reach ? ? ✈️
ပုဂံကိုသွားမယ်ဆိုရင် ကား၊ ရထား၊ လေယာဉ် ကိုယ်အဆင်ပြေတာ ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ ချောကတော့ ကားနဲ့သွားဖြစ်ပါတယ်။
^ Bagan is reachable by air, bus or train from Yangon or from Mandalay.
By plane > From Yangon – Asian Wings / Air KBZ / Golden Myanmar Airlines / Mann Yadanarpon Airlines / Myanmar National Airlines
From Mandalay – Asian Wings / Golden Myanmar / Mann Yadanarpon / Myanmar National Airlines
By Train > From Yangon – Daily4PM – Arrived Bagan at 10 AM
From Mandalay – Two departures daily
By Bus > JJ Express / Bagan Minn Thar Express – leave Yangon at 8 PM – arrived Bagan early morning
ပုဂံမှာ ဘယ်လိုလည်မလဲ / Get around ? ? ?
ချောကတော့ အီးဘိုက်ခ် တစ်စီးငှားပြီး ရောက်ရာပေါက်ရာလျှောက်သွားပြီး တွေ့သမျှ ဘုရားအကုန်အစုံ ဖူးခဲ့ပါတယ်။
ဘာတွေလုပ်မလဲ။ ဘယ်နေရာတွေလည်မလဲ။ / Things to do ?
1) တွေ့သမျှ ဘုရားအကုန်ဖူး / Roam around all the pagoda ruins
2) မဖြစ်မနေဖူးရမည့် ဘုရားများ / Important Temples and pagodas to visit
– အာနန္ဒာဘုရား / Ananda Temple
– ရွှေဆံတော်ဘုရား / Shwesandaw Temple
– ရွှေစည်းခုံဘုရား / Shwezigon Temple Pagoda
– သမ္ဗေညုဘုရား / Thatbyinnyu Temple
– ရွှေဂူကြီး / Shwegugyi Temple
– မနူဟာဘုရား / Manuhar Pagoda
– ဓမ္မာရံကြီး / Dhamma Yangyi Temple
– စူဠာမဏိ / Sulamani Pahto
– ဂူပြောက်ကြီး / Gubyaukgyi Temple
– ဂန့်ဒေါပုလင် / Gawdaw Palin Temple
– ဗူးဘုရား / Bupaya Stupa
3) နေဝင်ချိန်ကြည့် / Watch Sunset amidst the pagodas
ပုဂံကိုသွားဖို့စီစဉ်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက် ချောရဲ့ မှတ်စုလေးက အသုံးဝင်လိမ့်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ ပျော်ရွှင်စရာခရီးလေးဖြစ်ပါစေနော်။
I hope my travel notes are useful for you in planning your own trip. Happy Travelling! ❤️ ? ?️ ?